Ahina tsy ho voafehy intsony: 109 ireo nifindran’ny covid-19, olona roa hatrany ny maty | NewsMada
100 afakomaly, 109 omaly. Tsy mitsaha-mitombo ny isan’ny tranga vaovao amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Olona roa indray, omaly, no nindaosin’ny fahafatesana ka nanampy ny isan’ireo maty ho tafakatra 26. Ahina tsy ho voafehy intsony…
Efa aman-jatony amin’izay ny antontanisa. Tafakatra 109 ireo nifindran’ny covid-19, araka ny tatitry ny CCO, omaly. Nanomboka afakomaly io fiakarana ambony be io, nahatratra 100 niainga amin’ny valin’ny fitiliana natao ary tombanana fa hiakatra hatrany. Mbola lohalaharana hatrany ny eto Antananarivo satria avy eto avokoa ny 85 amin’ireo 109 ireo. Tsy voafaritra kosa ny tranga vaovao miisa 23 hafa raha avy any Moramanga ny iray.
Etsy an-daniny, niampy roa indray ireo namoy ny ainy ka tafakatra 26 izany izao ireo matin’ity valanaretina ity eto amintsika. Nifanesy roa hatrany izany tamin’ity herinandro ity ka izao nahatratra valo izao ireo nindaosin’ny fahafatesana, tao anatin’ny efatra andro farany.
Ankoatra izany, niampy enina indray koa ireo marary mafy « forme grave » ka miisa 34 izany izao.
Misy ihany anefa ireo sitrana…
Na izany aza, misy hatrany ireo sitrana na vitsy aza izany. Miisa 17 izany ka tafakatra 1 057 ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Miisa 2 512 ireo tratran’ny coronavirus hatramin’izao raha 1 429 ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny fahasalamany. Nahavita fitiliana 23 244 kosa ireo laboratoara eto amintsika hatramin’izao.
Tsiahivina fa nahatratra 698 ireo tratran’ny covid-19, ny faran’ny volana mey teo, niisa dimy ireo maty. Tafakatra 2138 ireo nifindran’ny valanaretina, ny faran’ny volana jona, miisa 20 ireo namoy ny ainy. Ho sarotra sy hanahirana ny toe-draharaha ary ahina tsy ho voafehy!